| सरकार अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव
सरकार अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव
मेचीकाली : 2018-01-29 11:02:18
काठमाडौं, १५ माघ :
देशभरका सरकारी विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव रहेको छ । सञ्चालनमा रहेको १ सय ३५ सरकारी अस्पतालमा ४ सय भन्दी बढी विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव भएको हो । अस्पतालमा बिशेषज्ञ चिकित्सक संगै मेडिकल अधिकृतको पनि अभाव छ ।
कैलालीको टिकापुर अस्पतालमा एघार जना विशेषज्ञ चिकित्स र ४ जना मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी भएपनि १ जना मात्रै विशेषज्ञ चिकित्सक रहेका छन् । दरवान्दी अनुसार १० जना चिकित्सकको पद खाली रहेको अस्पतालका प्रमुख डा. नरेन्द्र खनालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘३ जना मेडिकल अधिकृतको पद पनि रिक्त छ ।’ उहाँका अनुसार एकजना बिशेषज्ञ, एकजना मेडिकल अधिकृत र अन्य चिकित्सक गरी ५ जनाले ५१ शैयाको अस्पताल सञ्चालनमा गरीरहेका छन् । ५० शैयाको जिल्ला अस्पताल इलाम १ जना विशेषज्ञ चिकित्सकके भरमा चलेको छ । ११ जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी भएपपिन अहिले एक जना मात्रै रहेको अस्पतालका डा. प्रमुख प्रभु साहले बताउनुभयो । ‘५ जना मेडिकल अधिकृतको दरवन्दीमा १ जना मात्रै कार्यरत हुनुहुन्छ ।’ डा. साहले जानकारी दिनुभयो ।
देशकै सबैभन्दा ठुलो र जेठो वीर अस्पतालमा पनि विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाब छ । आवश्यक मात्रमा चिकित्स नहुँदा सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो रुपमा उपचार सेवा दिन नसकेके बीर अस्पतालका निर्देशक भूपेन्द्र बस्नेतको भनाइ छ । सरकारी अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक नभएको जानकारी सरकारलाई छ । तर कहिले सम्म पूरै दरबन्दीमा चिकित्सक खटाउने हो त्यसबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयसंग अहिले सम्म कुनै योजना नबनाएको छैन । स्थास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीकृष्ण गिरीका अनुसार ठोस योजना नबन्दा सरकारी अस्पतालमा जनशक्ति पु¥याउन सकिएकौ छैन ।